Nloghachi & nkwụghachi
Nloghachi & nkwụghachi, Iwu Mbuga
Ndị na - eweta ngwaahịa nwere ike (ọkachasị maka iwu omenaala) chọrọ oge nhazi ọzọ tupu mbufe nke ihe. Ndị ahịa ga-amara gị ọkwa na ọnọdụ ndị a. Oge nhazi oge site na ndị na-ebunye ha sitere na 1 ruo ụbọchị iri. Dabere na ebe ị na-aga n'ime US ma ọ bụ International, biko kwe ka ụbọchị 10 ruo ụbọchị iri atọ ka iwu gị wee rute. Iwu ngwaahịa n'ime US nwere okpokolo agba oge.
Iwu gafere ụbọchị iri atọ site na inata iwu gị. Enweghị ike ịkwụghachi ma ọ bụ gbanwere iwu na mpụga oge ahụ. Iweghachi ihe (s) ga-abụrịrị ejibeghi na ọnọdụ mbụ ya na nkwakọ ngwaahịa mbụ. Wepu na nloghachi: A gaghị eweghachite ngwaahịa ndị na-emebi emebi dị ka nri, ifuru, akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ.
Anyi anabataghikwa ngwa ahia ma o bu ihe ocha, ihe ojoo, ma obu mmiri oku ma obu ikuku. Ihe ndị ọzọ anaghị eweghachite: Kaadị onyinye Ihe enwere ike ibudata ngwa ngwa sọftụwia Somefọdụ ihe gbasara ahụike na nlekọta onwe gị Iji mezue nloghachi gị, anyị chọrọ nnata ma ọ bụ akaebe nke nzụta. Biko ezipụtaghị zụọ gị na ndị nrụpụta. Enwere ọnọdụ ụfọdụ ebe a na-enye naanị nkwụghachi ego (ma ọ bụrụ na ọdabara) Akwụkwọ nwere akara ngosi doro anya nke iji CD, DVD, teepu VHS, sọftụwia, egwuregwu vidio, teepu cassette, ma ọ bụ vinyl ndekọ nke megherela ihe ọ bụla adịghị n'ọnọdụ ya, mebiri emebi ma ọ bụ na-efu efu maka ihe kpatara na ọ bụghị n'ihi njehie anyị Ihe ọ bụla eweghachitere karịa ụbọchị 30 mgbe nnyefe nkwụghachi (ọ bụrụ na ọdabara)
Ozugbo anabatara ma nyochaa gị, anyị ga-ezitere gị email iji gwa gị na anyị anatala ihe ị laghachiri. Anyị ga-emekwa ka ị mara nnabata ma ọ bụ ịjụ nkwụghachi gị. Ọ bụrụ na ị kwadoro, mgbe ahụ, nkwụghachi gị ga-arụ ọrụ, yana kredit ga-etinye aka na kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụ usoro izizi mbụ, n'ime ụbọchị ụfọdụ. Mbubreyo ma ọ bụ nkwụghachi nkwụghachi (ma ọ bụrụ na ọdabara) Ọ bụrụ na ịnabatabeghi nkwụghachi, buru ụzọ lelee akaụntụ akụ gị ọzọ. Mgbe ahụ kpọtụrụ ụlọ ọrụ kaadị kredit gị, ọ nwere ike iwe obere oge tupu ezighachite ego gị. Ọzọ kpọtụrụ ụlọ akụ gị. E nwere oge ụfọdụ nhazi oge tupu nkwụghachi nkwụghachi. Ọ bụrụ n’iburu nke a niile ma ị kabatabeghị nkwụghachi gị, biko kpọtụrụ anyị na [email protected]
(ọ bụrụ na ọdabara) Naanị ihe ọnụahịa enwere ike ịkwụghachi azụ, ọ dị nwute na enweghị ike ịkwụghachi ihe ndị erere ere. Mgbanwe (ma ọ bụrụ na ọdabara) Anyị na-edochi ihe naanị ma ọ bụrụ na ha nwere nkwarụ ma ọ bụ mebie emebi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ya maka otu ihe ahụ, zitere anyị email na [email protected] ma zipụ ihe gị na:
Trivoshop Inc- laghachi
Ọ bụrụ na akara akara ihe ahụ dị ka onyinye mgbe azụrụ ya ma zigara gị ya, ị ga-enweta otuto onyinye maka uru nloghachi gị. Ozugbo enwetara ihe a laghachi, a ga-ezitere gị akwụkwọ onyinye. Ọ bụrụ na -abụghị ihe ahụ akara dị ka onyinye mgbe a zụtara ya, ma ọ bụ na onye nyere onyinye nyere iwu ka onwe ha nye gị ma emechaa, anyị ga-ezighachi onye nyere gị onyinye ahụ, ọ ga-achọpụtakwa nloghachi gị. Mbupu Iji laghachi ngwaahịa gị, ikwesiri izipu ngwaahịa gị:
Ga-ahụ maka ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ nke onwe gị maka ịlaghachi ihe gị. Ego akwụ ụgwọ maka mbupu.
Ọ bụrụ n ’ị nweta nkwụghachi, ọnụ ahịa nkwụghachi ga-ewepụ ego na nkwụghachi gị. Dabere n’ebe i bi, oge ọ ga-ewe tupu ngwaahịa gbanwere gị iru gị, nwere ike ịdị iche. Kwụghachi ụgwọ nwere ike itinye dabere na ọnọdụ nke usoro a ma akagbuo ma ọ bụ weghachi ihe ahụ. Ọ bụrụ na ị na-ebufe ihe karịrị $ 75, ị kwesịrị ịtụle iji ọrụ mbupu ọrụ ma ọ bụ ịzụta mkpuchi mbupu. Anyị anaghị ekwe gị nkwa na anyị ga-enweta ihe ị laghachiri.